Madheshvani : The voice of Madhesh - ओलीको राजीनामा माग्ने अधिकार प्रचण्डलाई छैन : सत्यनारायण मण्डल
ओलीको राजीनामा माग्ने अधिकार प्रचण्डलाई छैन : सत्यनारायण मण्डल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता
० नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद लामो समयदेखि गहिरिँदै गएको छ । नेकपा विभाजन नजिक पुगेको हो ?
— कुनै पनि कुरा लुकाउने÷छुपाउने परिपाटी नेकपाभित्र छैन । पार्टीमा हुने गरेका सबै कुरा नेपाली जनतासमक्ष पारदर्शीरुपमा देखिँदै आएको छ । अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद वैचारिक वा सैद्धान्तिक नभएर कृत्रिम हो । केही गुटवादी नेताहरुले पद र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विवाद खडा गरेकोले यसको निकास निस्किन समस्या भइरहेको छ । चुनावमा जानुभन्दा पहिला दुई पार्टीले गठबन्धन ग¥यो र चुनावमा गयो । त्यसपछि पार्टी एकताको घोषणा भयो । एकता प्रक्रिया पनि पूर्णरुपले पूरा हुन सकेको छैन । एकता महाधिवेशन नभएसम्म यो संक्रमणकालीन अवस्था हो र अहिलेको विधान पनि त्यस्तै छ । एकता महाधिवेशन नभएसम्म दुई जना अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । आगामी चैतमा महाधिवेशन गर्ने मिति पनि तोकिसकिएको छ । त्यसपछि अहिले आएर कहाँ के भयो, के त्रुटि भयो मलाई थाहा छैन ।
० तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता स्वार्थका लागि मात्रै भएको भन्ने देखिन्छ नि ?
— सबै कार्यकर्ताहरु त्यस्तै छन् भन्ने कुरो पनि होइन । समस्या नेतृत्वमा देखिएको छ । हाम्रो अन्तरिम विधानमा भनिएको छ कि कुनै समस्या हुँदा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा अगाडि बढ्ने । यी कुराहरु हुँदै आएको छ । तर, अहिले अपर्झट्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामाको कुरा किन आयो हामी बुझ्न सकेका छैनौं । अहिले पार्टीभित्र गुटहरु छन् । पूर्वएमालेभित्र पनि गुटहरु थियो । अहिले नेकपा बनिसकेपछि प्रचण्डजी ती गुटहरुभित्र प्रसस्त खेल्ने मौका पाउनुभो जसले गर्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
० तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटीरुपमा निर्णयहरु गर्नुभयो, पार्टीको विधि, विधान र निर्णय मान्नु हुन्न भन्ने आरोपहरु लगाउँदै उहाँको राजीनामाको माग उठेको हो नि ?
— यी आरोपहरु उहाँहरुले पार्टीको प्लेटफर्ममा राखेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
० तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै बस्न चाहनुभएको छैन त ?
— जब बैठक सुरु भयो, दुई दिनसम्म सीमा विवादबारे छलफल भयो । ६ जना मात्रै बोल्न बाँकी रह्यो । अनि मदन भण्डारी जयन्तीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो भारतको कुरालाई लिएर, त्यसपछि प्रचण्डजीले बैठकलाई अर्कोतिर मोड्नुभयो । उहाँहरु खुमलटारमा मिटिङ गरेर आउनुभो अनि केपी ओलीको राजीनामाको माग गर्नुभो । केपी ओलीको दुईटै पदबाट राजीनामा माग गर्ने अधिकार कसलाई छ ? अहिले दुईटा अध्यक्ष छन् । यदि केपी ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उहाँलाई पार्टीले कतिको सहयोग गरेको छ ? उहाँले कसरी एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउनुभो ? स्थायी कमिटीमा माधव नेपालका मान्छे छैनन् कि सरकारमा छैनन् ? किन निहुँ खोजिँदैछ ?
० प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न लागेको, आफ्नै पार्टी नेताहरु भारतको इशारामा सक्रिय भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा उहाँको राजीनामा माग जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । भारतले नेपालको सरकार कसरी ढाल्न सक्छ त ?
— अहिलेसम्म भारतले नेपाललाई जोगाउँदै आएको छ । २००७ सालको परिवर्तनदेखि राजाको सचिवालयमा भारतले नै तोकेको व्यक्ति हुने, क्याबिनेटमा पनि त्यस्तो हुने अनि जति पटक परिवर्तन भएको नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । भारतको एकलौटी उद्देश्य सधैं रहँदै आएको छ नेपाललाई विलय गराउन । केपी ओलीलाई भारतले त राम्रो मानेको छैन । यदि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भने संविधान निर्माण हुँदा भारतको टाउको किन दुख्छ ? संविधान ठिक छ वा छैन त्यसको निक्र्योल नेपाली जनताले गर्छ । भारत निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नेपाल छ । अहिले पूरा विश्वमा कोरोनाले आक्रान्त बनेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने हो ? यो अधिकार प्रचण्डलाई कसले दियो ? यदि केपी ओली राजीनामा गर्छन् भने प्रचण्डले पनि राजीनामा गर्नुपर्छ । यिनीहरु खुशियाली थियो कि केपी ओली अब अस्पतालबाट फर्के आउँदैनन् तर अर्को जीवनको प्रमाणपत्र लिएर आउनुभयो । त्यसकारणले यिनीहरुलाई छटपटी भएको हो ।
० ओली ओली सरकार त कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पनि असफल भएको छ नि ?
— कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको छैन । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा मृत्युदर कम छ, त्यो किसिमको संक्रमण पनि फैलिएको छैन । प्रकृतिले पनि नेपालको रक्षा नै गरेको छ । काम गर्ने क्रममा कतिपय गल्ती त्रुटीहरु नभएको होइन । यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । नेपालकै इतिहासमा प्रतिपक्षी दलले अहिले केपी ओलीको विकल्प खोज्नु हुँदैन भनेर इमान्दार धर्म निर्वाह ग¥यो । तर यी कम्युनिष्टहरु, एउटै पार्टीमा बसेर किन राजीनामा मागिरहेका छन् ? यिनीहरु त पल्केका छन् । दुनियाँमा कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भएको जस्तो भइरहेको छ । के यी दुई चार जना नेताको मात्रै छ यो पार्टीमा ? लाखौं लाख जनताले यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन योगदान छ । हजारौं हजार कार्यकर्ताहरुले आफ्नो जीवनको आहुति दिएका छन् । यी दुई चार जना नेतालाई के पुगेन ? पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्, त्यसभन्दा पहिला मन्त्री पनि भएका छन् । एक कार्यकाल पनि केपी ओलीले पार्टी चलाउन पाउँदैन ? राजीनामा माग गर्ने हो ? माधव नेपालले १५ वर्ष पार्टी चलाउनुभो, झलनाथ खनाल १३ वर्ष चलाउनुभयो उहाँहरुले के गर्नुभयो ? उनीहरु केपी ओली जति जीवन त्यति दुःख कष्ट भोगेका छन् ?
० पार्टीका एक जना अध्यक्ष र दुई जना वरिष्ठ नेता नै केपी ओलीको राजीनामा त्यतिकै माग गरेको त होइन होला नि ?
— केपी ओली जातले बाहुन भएपनि एउटा खाँटी सर्वहारा वर्गका नेता हुन् । तर, यिनीहरु (प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ) भनेको उच्च वर्गको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, जमिन्दार हरु हुन् । भन्नका लागि कम्युनिष्ट तर वर्गीय चिन्तन भएको यही हो । यही सामन्तवाद उनीहरुभित्र देखिने ।
० प्रचण्ड–नेपाल समूहले केपीको राजीनामा मागेको माग्यै छ, केपी ओली पनि आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ । यसरी कति दिनसम्म नेकपा एकढिक्का रहन सक्छ ?
— यिनीहरु पार्टीलाई एक ढिक्का रह्न दिन नै चाहँदैनन् । प्रचण्डजी पनि कति वटा पार्टी विघटन गर्दै अगाडि बढ्दै आउनुभएको छ । माधव नेपालको इतिहास पनि त्यस्तै छ तर दोष केपी ओलीमाथि लगाउँछन् । २०५४ सालमा पार्टी कसले फोडेको हो, कसको इशारामा ? त्यहीं बेला दुई तिहाइ बहुमत आउँथ्यो । त्यसकारणले यिनीहरुले यदि पार्टी फुटाउँछन् भने आफै समाप्त हुन्छन् ।
० तर, केपी ओलीले नै पार्टी विभाजन गर्न चाहेका छन् भन्ने आरोप छ । उहाँले नेकपा एमाले पनि गठन गराइसक्नुभएको अर्को पक्षको आरोप छ नि ?
— केपी ओलीले नै नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको हो भन्ने कुराको प्रमाण छ उनीहरुसँग ? नेकपा एमालेप्रति धेरै जनाको विश्वास छ । चुनावी तालमेल गर्दा प्रचण्डजीले पनि यो कुरा स्वीकार्नुभएको थियो कि भूल भयो भनेर । नत्र एउटै सूर्य चुनाव लिएर नै चुनाव लड्ने सहमति भएको थियो । पछि बखेडा झिकेपछि अलग–अलग चुनाव चिन्हमा भयो । त्यहीं कारणले गर्दा दुई तिहाइका लागि १५–१६ वटा सिट कम भयो । मूल कुरो अहिले पनि नेकपा एमाले र सूर्य छाप चुनावचिन्हप्रति लाखौं लाख मानिसहरुको विशाल श्रद्धा छ ।
० नेकपाको विवाद कसरी समाधान हुन्छ त ?
— म त आशावादी छु कि नेकपाभित्रको विवाद समाधान हुन्छ भनेर । हामीले आफ्ना नेताहरुप्रति जति आलोचनात्मक कुराहरु गर्दा पनि आखिर पार्टीलाई डे¥याएर यहाँसम्म ल्याउने उहाँहरु नै हो नि । विगतमा पनि पार्टी विभाजन भएको अनुभव त उहाँहरुसँग छँदैछ नि । उहाँहरुले आफ्नो महत्वाकांक्षीका लागि पार्टी फुटाएको तितो यथार्थ त छ । त्यसकारणले अहिले फेरि दोहो¥याएर यस्तो कार्य ग¥यो भने उहाँहरु भविष्य अन्धकारमय हुन्छ । उहाँहरुले धर्तीमा समाधि लिनैपर्छ ।